आइतबारदेखि बैंक तथा वित्तिय संस्था संचालन गरीदै ! – MEDIA DARPAN
आइतबारदेखि बैंक तथा वित्तिय संस्था संचालन गरीदै !
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सबै शाखा आइतबारदेखि सञ्चालन हुँदै छन् । चैत ११ देखि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि उनीहरुले सीमित शाखाबाट दैनिक २/३ घण्टा मात्र सेवा दिइरहेका थिए । लकडाउनको अवधिमा खुलेका बैंकका शाखामा पनि निकै न्यून मात्र ग्राहक आउने गरेका थिए ।
नेपालगन्जका १६ वर्षीय पुरुष कोरोना सङ्क्रमित भएको पुष्टी, १०१ नेपाली बने कोरोनाका सिकार